Accueil > Gazetin'ny nosy > Filoha Hery Rajaonarimampianina: Tsy mila anao hofidiana intsony ny Malagasy
Filoha Hery Rajaonarimampianina: Tsy mila anao hofidiana intsony ny Malagasy
Ady hevitra be ny mahakasika ny fifidianana izay ho filoham-pirenena amin’ny taona 2018 ho avy io. Hatreto Antananarivo renivohitr’i Madagasikara ka hatrany ambanivohitra lavitra any dia samy manambara ny heviny avy koa. Ny feon’ireny vahoaka izay tsy hita amin’ny fahitalavitra sy ny haino amanjery ireny no nangonina ka hotanterina eto. Tsy dia mahatakatra raharaha pôlitika ambony izy ireny fa ny zava-misy iainany amin’ny andavan’andro ihany no lazainy ary mampimenomenona azy ka ilazany amin’ireo olona izay mifanerasera aminy fa indrindra raha olona hitany fa afaka hampita hafatra amin’ny fanjakana.
Ny tenin’izy ireo dia milaza fa mbola tsy nisy fitondrana nampijaly vahoaka toa izao nisy tamin’ny fitondran’ingahy Hery Rajaonarimampianina ny firenena izao. Maro hoy izy ireo no filoham-pirenena nitondra an’i Madagasikara fa ity fitondrana ity no tena nampidi-kizo ny vahoaka Malagasy indrindra hatramin’izay. Mitanisa ny fiainany an-davan’andro izy ireo amin’izany. Ny renim-pianakaviana izay tafaresaka taminay aza dia sady mitomany no manozona mihitsy. Isan’ny mampitaraina azy ireo ny fiakaran’ny vidim-bary tao anatin’ny telo volana izay ka niakaran’ny vidim-potsimbary ho 750 ariary ny kapoaka na 2300 ariary ny iray kilao, raha toa ka novidina 350 ariary ny kapoaka volana vitsy lasa izay ary 1200 ariary ka hatramin’ny 1400 ariary ny iray kilao. Misy aza toerana hafa efa tafakatra hatrany amin’ny 1000 ariary ny iray kapoaka, ka vidina 3500ariary ny iray kilao. Famonoana velona ny Malagasy no dikan’izany, hoy ny reny maro tafaresaka taminay.
Midika fiakaran’ny vidin-javatra maro amin’ny filana andavan’andro ny mponina izany. Tsy takatra intsony ny fiakaran’ny vidim-piainana. Tsy izao fotoana izao ihany nefa no niakaran’ny vidim-piainana izany fa hatramin’ny taona 2014 izay nitondran’ingahy Hery Rajaonarimampianina ny firenena.
Voalaza matetika koa ny olana ara-pandriam-pahalemana izay nirongatra mafy hatramin’ny fitondran’ny antoko HVM (Hery vaovao ho an’i Madagasikara) sy ingahy Hery Rajaonarimampianina izay. Manambara mazava tsara ireo tantsaha sy tambanivohitra any amin’ny faritanin’i Fianarantsoa, izay novangianay nandritra ny fetin’ny krisimasy 2017 ity fa ny fanjakana no manana dahalo ankehitriny. Izy ireo no manakarama olona hanao dahalo aty aminay ary mandroba ny omby sy ny fanananay. Porofon’izany ny fananan’izy ireo basy kalaky (kalachnicov) sy bala tsy mety lany izay ampiasan’ireo dahalo ireo rehefa manafika. Mbola tsy nisy toa izao hoy ihany ny fanamafisana fitarainana ataon’izy ireo amin’izay olona mifanena aminy. Tsy afaka ao ambavan’izy ireo koa ny fanondranana omby nataon’ny Sinoa sy ny mpitondra fanjakana izay nifanaraka tamin’ity raharaha ity. Vokatr’izany dia korontana tanteraka no misy amin’ny kaominina rehetra manerana an’i Madagasikara. Doro-trano, halatr’olona atao takalon’aina, fakana tanin’olona tsy amin’antony.
Tamin’izao fanjakana Hery Rjaonarimampianina izao koa no mbola nahitana fanondranana harem-pirenena antsokosoko goavana indrindra toa ny andramena, ny volamena sy harena ankibon’ny tany, ary harena voajanahary tsy azo amidy isan-karazany. Mitaraina ny amin’izany daholo izay toerana nalehanay maro tany ambanivohitra tany. Maro ny zavatra mampitaraina ny olona ankehitriny amin’ny tsy fahavitan’ny fanjakana Hery Rajaonarimampianina mitondra firenena intsony.
Tsy hotanisaina intsony ny kolikoly, ny fanodinkodinana volam-panjakana, ny fanaparam-pahefanana. Efa toa ny fiainana andavan’andro ny olona izany zava-doza eto amin’ny firenena izany.
Tsy holazaina intsony ny fahotana mahafaty nataon’ny fanjakana mahakasika ny fanapahana ny karaman’ny mpiasam-panjakana tamin’ity volana desambra ity. Fianakaviana misa 20 000 mahery notapahana karama manerana an’i Madagasikara amin’izao andron’ny fetin’ny faran’ny taona izao. Lazaina fa mpiasam-panjakana matoatoa hono nefa olona tonga miasa ara-dalàna izao. Tena fanjakana manaonao foana tanteraka no misy. Efa tena manao izay hampirotaka ny vahoaka ity fanjakana ity, saingy ny olona no tsy tia krizy intsony ka manaiky lembenana fotsiny ihany. Tsy maintsy hisy fiafarany nefa izany.
Maro tsy ho vita tanisaina eto ny hadalana nataon’ny fanjakana Hery Rajaonarimampianina io na dia miezaka handio izany amin’ny alalan’ny haino aman-jery maro samy hafa aza izy. Hatrany amin’ny vadin’ny filoham-pirenena sy ny zanany ary ny rahalahiny avy no efa nahitana olana sy resaka goavana teto amin’ny firenena ary mbola mitohy izany hatramin’izao. Tsy tenenina intsony ny ataon’ny mpikambana mpanorina ny antoko HVM izay nanao tantely afa-drakotra ny harem-pirenena sy ny fanjakana.
Eo anatrehan’izany rehetra izany no ilazan’ny Malagasy maro ankehitriny fa tsy mila an’ingahy Hery Rajaonarimampianina hilatsaka hofidiana ho filoham-pirenena intsony izy ireo. Tokony hanaja tena amin’izay izy satria be loatra izay zavatra tsy manjary nitranga tamin’izao fitondrany izao. Tsara ny hahalalan’izao hetahetan’ny Malagasy maro momba ny fifidianana ho filoham-pirenena amin’ny taona 2018 ho avy tsy ho ela izao, ary ny mba hahafantarany koa ny fijerin’ny Malagasy azy.